Dagaalkii galbeedka Sitti oo Soomaali oo dhan wada taabtay. – Xeernews24
Dagaalkii galbeedka Sitti oo Soomaali oo dhan wada taabtay.
3. April 2021 /in WARAR/NEWS /von admin
Dagaalka oo geystay khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac fara badan ayaa waxaa ka dhacay duleedka Magaalada Garbaciise ee Galbeedka Gobolka Sitti kaas uu ku dhex-maray dad Soomaali shacab ah oo garab ka helayay ciidamada liyuu booliska Soomaali State iyo maleeshiyo hubaysan oo garabsan liyuu booliska Canfarta Itoobiya.
Dagaalka ayaa waxaa uu yimid kadib markii ciidamada Canfarta ay weerar ku qaadeen magaalada Garba-ciise, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal xoogan oo dad u badnaa shacab ah ku dhinteen.
Dad ku sugan degaannada lagu dagaalamay ayaa waxaa ay warbahinta u sheegeen in dad ka badan 10 ruux oo Soomaali ah ay dagaalka ku dhnteen halka 20 kale ku dhaawacmeen, kuwaas oo 6 kamid ah oo dhaawacooda culus yahay la geeyay Isbitaalka Biiki ee degmada Goota-Biki.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayan in Ciidamada Canfarta ay dib ugu laabteen degaanadii ay ka yimaadeen, waxaana Goobihii lagu dagaalamay ku sugan Ciidamada liyuu Boolis iyo maleeshiyaad degaanka oo soomaali ah.
Geesta kale waxaa maalinti shalay ahayd magaalada Catayte ee isla gobolka Sitti laga soo sheegey in la gubay magaalada qaybo ka mid ah waxaana ka soo baxaayey warar sheegayeey dabka magaalada gubay ay sababtay hub iyo rasaas ay liyuu booliska Canfartu ku soo garaaceen magaalada waa nuuc cusub oo dadka magaalada looga barakicin.
Dagaalkan galbeedka Sitti oo kolkii hora Soomaalidu ka war ahayn kali ku ahaa ummadda Soomaaliyeed ee ku nool galbeedka Sitti ayaa maanta noqday mid ay dhamaan Soomaali-State ku soo baraarugtay baaxadda dagaalka iyo sidday is maamulka Canfarta uga go,aan tahay in ay dhulka Soomaaliyeed xoog ku qaadato.
Waan-waan iyo wada hadal kaste canfari waxay ka fureysatay dhagaha, jawaabna waxay ka dhigtay weerar iyo duulaan aan kala joosi lahayn, halka maamulka Soomaali-State ee Mustafe Cagjar hogganka u hayana aan laga hayn ficil iyo qawl midna,fadhiidnimada maamulka Cagjar ayaa Liyuu booliskii Soomaalida ka dhigey in iyagga loo gurmaddo halkay shacabka xoola dhaqantada uga gurman lahaayeen.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2021/04/Liyu-2.jpg 960 720 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2021-04-03 10:23:352021-04-03 10:23:35Dagaalkii galbeedka Sitti oo Soomaali oo dhan wada taabtay.
Cadaymo Muujinaya In Ciidamada Dalka Itoobiya Ay Xasuuq Ka Gaysteen Gobolka... Galbeedka Sitti oo maanta holcaysay iyo Guulo la gaadhay.